राजनीति | Kantipur TV HD
स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरु आफूले चुनाव जित्ने मात्रै हैन, एकले अर्कालाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाएरै निर्वाचनमा होमिएका थिए ।खासगरी सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेले त एकले अर्कोलाई हराउने गरि बहुरंगी तालमेल समेत गरेका हुन् । अहिले निर्वाचनमा परिणामहरु आइरहँदा गठबन्धन र तालमेलमा मतदाताको रोजाई अलि फरक देखिएको छ । हारजितको लेखाजोखा गरिरहेका मुख्य दलहरुका टिप्पणी पनि फरक फरक आउन थालेका छन् ।
मुलुकभर मतगणना सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसले एकातिर निर्वाचन परिणाममा ढिलाइ भइरहेकोप्रति उम्मेद्वार र समर्थक आक्रोशित भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ मतदानलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गणनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण जताततै चहलपहल मात्र बढेको छैन, उपभोग्य वस्तुको खपत पनि बढेको छ । स्थानीय उत्पादनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत ३० प्रतिशतले बढेको छ । गाउँ-गाउँसम्म चुनाव प्रचार-प्रसारसँगै व्यापार व्यवसाय फस्टाएपछि स्थानीय व्यापारी र किसान दंग छन् ।
निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनमा विगतमा जस्तो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुँदा पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमै धेरै मत बदर भएको थियो । शिक्षित मतदाता धेरै भएका शहरमा किन धेरै मत बदर भए त ?
खानेपानीमा सँधै राजनीति: उम्मेदवारका बाचा र उपत्यकाबासीको अवस्था
काठमाडौंमा स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानीको सुविधा हरेक निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारका मुद्दा हुन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैजसो चुनावका बेला खानेपानी माग्ने र आश्वासन दिनेक्रम चलिरहेको छ । यसपालीको घोषणापत्रदेखि घरदैलो र सभाहरुमा खानेपानी मुख्य सरोकार बनेको छ । खानेपानीमा प्रमुख उम्मेदवारले गरेका बाचा र उपत्यकाबासीको अवस्था कस्तो छ त ?
पक्ष-विपक्षमा पोष्ट गरिरहनुभएको छ ? कारवाही हुन सक्छ !
सामाजिक सञ्जालमार्फत् तपाईंले कस्ता सामग्री राख्ने गर्नुहुन्छ? अझ चुनावका बेला कसैको पक्ष र विपक्षमा समेत केहि पोष्ट गरिरहनुभएको होला ! तर आज रातिदेखि भने चुनावमा उठेको उम्मेद्वारको प्रचार हुने कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन । त्यति मात्र होइन राखिएका प्रचार सामग्रीसमेत हटाउनुपर्ने छ। निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचार–प्रसार गरेमा आचारसंहित विपरित हुन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सबै तयारी पुरा
स्थानीय तह निर्वाचनको सबैजसो तयारी पुरा भएको छ । मतदान हुन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा आवश्यक निर्वाचन सामाग्री सहित मतदान अधिकृत र सुरक्षा टोली ७ सय ५३ पालिकाका सबै मतदान बुथमा पुगेका छन् । अब मतदान अघि के कति काम बाँकी छ त ?
मतदान गर्न घर फर्किनेहरुको लर्को
स्थानीय निर्वाचनको मतदान हुन तीनदिन मात्रै बाँकी रहँदा भोट हाल्न घर फर्कनेहरु बढेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट चुनावका लागि गृहजिल्ला जानेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।
मौन अवधि: के-के गर्न पाईदैन ?
आज राती १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने परिस्थिति बनाउन चुनावका दिनसम्म मौन अवधि लागु गरिन्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मौन अवधिभर मतदातालार्इ प्रभाव पार्ने र आचारसंहिता विपरितका काम गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्म हुनसक्छ । त्यसो भए मौन अवधिमा के के हुन्छ र क गर्न पाईदैन त ?
छाउपडी प्रथा र बालविवाह जस्ता कुरिति चुनावी मुद्दा नै बनेनन्
सामाजिक विभेद र र कुसंस्कृतिले गाडेको जरो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै हट्न सकेको छैन। त्यसमाथि कुपोषण, गरिबी र अशिक्षाको पनि उस्तै समस्या छ । ९ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ५१ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहको चपेटामा छन् । तर यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कुरिती र विभेद अन्त्यलाई दल र उम्मेद्वारहरुले दरिलो मुद्दा बनाएनन् ।
सप्तकोशी नदी कटान रोक्ने योजना ल्याउन मतदाताको माग
सप्तकोशी नदीको कटान र जंगली जनवारको आक्रमणबाट बर्षौदेखि पिडित बन्दै आएका कोशीटप्पु बन्यजन्तु आरक्ष आसपासका स्थानीयलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलले हरेक निर्वाचनमा आकर्षक घोषणपत्र बनाउने गरेका छन् । जंगली जनवारको नियन्त्रण र जनताको सुरक्षालाई त्यसक्षेत्रका राजनीतिक दल र उमेद्धवारले यसपटक पनि मतदाता रिझाउने गतिलो माध्यम बनाएका छन् ।
नेपालगन्जमा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक
स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्ध बनाएर होस् वा एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रेका ठूला राजनीतिक पार्टी ग्रामिण क्षेत्रलाई भन्दा पनि नेपालगन्ज उपमहानगरको निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको बिषय बनाएका छन् । पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर भएकाले पनि यहाा हुने हारजितले संघीय संसदको निर्वाचनको प्रारम्भिक खाका समेत निधारण गर्नेछ ।